Tag: 2010 | Martech Zone
Dukaameysiga Fasaxa Internetka
Sabti, Noofembar 12, 2011 Sabti, Sebtember 19, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Wax ka iibsiga khadka tooska ah ayaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya… mana jiraan wax gaabis ah oo weli socda. BlueKai waxay soo saartay infographic soo socda si loogu diyaar garoobo xilligan fasaxa fasaxa ee internetka. Laga soo bilaabo infographic: Ganacsiga qadka tooska ah ayaa door weyn ka ciyaaray xilliyada fasaxa ciidaha sanad walba tan iyo markii la aasaasay. Laakiin maaddaama suuq-geynta Internetku uu noqonayo mid aad u casriyeysan [macaamiishana ay noqdaan kuwo aad u xeel-dheer shabakadda], dukaamaysiga fasaxa waxaa ku socda isbadallo qoto dheer. Hoos waxaa ku yaal isbeddellada muhiimka ah ee ka dambeeyay dukaamaysigii 2010
Video: Kacaanka Warbaahinta Bulshada 2
Monday, May 10, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Kacdoonka Warbaahinta Bulshada 2 waa u cusbooneysiinta fiidiyowga asalka ah ee cusub oo la cusbooneysiiyay warbaahinta bulshada iyo tirakoobka moobiilka oo ay adag tahay in la iska indhatiro. Iyada oo ku saleysan buuga Socialnomics: Sida Warbaahinta Bulshadu u beddesho Qaabka aan u Noolahayno una Ganacsaneyno ee Erik Qualman.
Webtrends Demo Reality Demi
Arbacada, February 3, 2010 Sabtida, Juun 12, 2014 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Haddii aadan arkin fiidiyowga soo socda, dhagsii si aad u aragto mashup dhab ah oo la kordhiyay oo la adeegsanayo Webtrends! Kani waa muujinta weyn ee ka faa'iideysiga falanqaynta iyo waxqabadka goobta lagu arkay shirkii Webtrends Engage 2010. Kaamiradu waxay heleysaa oo raadineysaa calaamadaha, cusbooneysiineysaa Webtrends, iyo - waqtiga-dhabta ah - waxay muujineysaa qeexitaannada xaadirinta ee ugu dambeeyay!
2010: Sifee, Shakhsiyee, Kor u qaad
Sabtida, Diisambar 12, 2009 Jimco, Juun 27, 2018 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Waxaa nagu buuxsamay macluumaadka ka socda baraha bulshada, raadinta iyo sanduuqayaga. Qiyaasta ayaa sii kordheysa. Wax aan ka yarayn 100 sharci oo ku jira sanduuqa sanduuqa si aan ugu gudbiyo farriimaha iyo digniinta si habboon. Jadwalkayga ayaa iswaafajiya inta udhaxeysa Blackberry, iCal, Google Calendar iyo Tungle. Waxaan hayaa Google Voice si aan u maareeyo wicitaanada ganacsiga, iyo YouMail si aan u maareeyo wicitaanada tooska ah ee taleefankayga. Joe Hall wuxuu maanta qoray in walwalka asturnaanta iyo adeegsiga macluumaadka shaqsiyeed ee Google ay awood u leedahay